Ciidanka DF iyo dadka degaanka oo dib ula wareegay Bacaadweyne | KEYDMEDIA ONLINE
GAALKACYO, Soomaaliya - Dadka degaanka iyo Ciidanka dowladda oo iskaashanaya, ayaa dib ula wareegay degaanka Bacaadweyne ee Gobolka Mudug kadib markii saacadihii hore ee saaka ay ka qabsatay Al-Shabaab.
Dagaal culus ayaa dhacay oo u dhaxeeyay Al-Shabaab iyo dadka degaanka oo is abaabulay kadibna weerar rogaal celis ah ku qaadey Kooxdan xagjirka ah ee dhibaatada ku haysa shacabka Soomaaliyeed.
Khasaaro ayaa ka dhashay dagaalka, inkastoo aan tirada la ogeyn. Dadka degaanka waxay soo bandhigeen mid kamid ah xubnaha Al-Shabaab oo la qabtay isagoo nool, waxaana lagu wareejiyay Ciidanka guutada 21aad ee Xoogga dalka.
Galmudug ayaa dhawaan shaacisay guluf dagaal oo ka dhan ah Al-Shabaab, waxaana muuqata in balan-qaadkaas uusan hirgelin, maadaama uu Maamulkan isaga noqday gacan ku gabad, oo lagu soo weerarayo magaalooyinka uu ka taliyo.
0 Comments Topics: dagaal gaalkacyo galmudug mudug